Accueil > Gazetin'ny nosy > Rajao: Tsy hilatsaka fa hanohana an’i Andry ?
Mandeha dia mandeha ny resaka ankehitriny fa tsy hilatsaka ho kandida ho filoham-pirenena intsony ingahy Hery Rajaonarimampianina. Tsy mba ny olona avy aty ivelan’ny antoko ity no nahenoana izany fa miainga avy ao anatin’ny HVM tanteraka. Ny depiote avy any Betroka Nicolas Randrianasolo izay mpanohana tsy misy fepetra an’I Hery Rajaonarimampianina dia nanambara tamin’ny fivoahan’ny mpikambana ao amin’ny governemant Ntsay Christian iny fa fihetsika olona tsy hilatsaka ity ataon’ingahy ity. Soa ihany aho fa tsy niady amin’ny mpanao politika hafa hoy izy fa saika nidiran-doza teo. Tsy maintsy hikarakara ny tenako aho mba hahavoafidy ahy indray, tsy izy intsony ity ataon’ingahy Hery Rajaonarimampianina ity hoy hatrany izy. Ny fampanantenana poakaty nataon’ingahy io tao Betroka dia manaporofo fa tsy hilatsaka tokoa ingahy Rajao ity hoy hatrany izy. Tsy hisy olona hifidy azy intsony ao fa indrindra mbola nasiany izao fihetsika mamoafady izao hoy hatrany ny filazany.
Omaly indray dia senatera iray avy amin’ny ilany atsimo atsinanana iny no nanambara fa tsy hilatsaka intsony io rangahy io. Izany hoy ity senatera ity no antony anaovany io fihetsika mandeha irery io. Voalazany hatrany fa hanohana an’i Andry Nirina Rajoelina hono ingahy Rajaonarimampianina amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena io.
Raha ny fanazavany hatrany dia isan’ny voarakitra amin’ny fifanarahana maizina izay nataon’izy roalahy ireto ity ny tsy filatsahiny intsony ity.
Raha zohina tokoa ny raharaham-pirenena dia azo inoana ny fisian’izao ho fanohanana hataon’ingahy Hery Rajaonarimampianina an’i andry Nirina Rajoelina izao. Matetika no mihaona izy roalahy ireto hoy hatrany ny mpanaraka ny vaovao politika. Teto amin’ity gazety ity dia efa namoaka lahatsoratra maromaro mahakasika azy roalahy ireto. Ny lohan-teny tamin’izany dia ny hoe: Rajoelina sy Hery manao vazaha mody miady, Hery sy Rajoelina : Ikotofetsy sy Imahaka ary Trimobe vaovao.
Amin’izao fotoana izao aza dia olom-boafidy avy ao amin’ny antoko misy azy mihitsy no mamoaka fa tsy hilatsaka i Hery fa hanohana an’i Rajoelina indray.
Raha tohizana ny famakafakana ny zavatra mitranga ankehitriny dia hita fa tsy mifanohitra amin’izany ny fihetsik’izy roalahy ireo. Samy mamono afo ny mpitaky ny fanovana, samy milaza fa hanao fifidianana mialohan’ny fotoana, ary samy manameloka ny fihetsiketsehana politika misy ankehitriny. Tsy mbola ampy roa volana akory nefa izay dia nifangala-baraka sy nifanongana izy roalahy ireo tamin’ny alalan’ny depiote mpanohana ny andaniny sy ankilany.